Laacibkii kooxda Arsenal ka reebay Champions League sanadkii 2003 ee John Crew oo noqday jilaa dhanka Filimmada ah – Gool FM
(Yurub) 01 May 2019. Laacibka lagu tilmaamo ‘Ninkii dilay Arsenal’ ee goolkii uu ka dhaliyay ay kaga hareen Koobka horyaallada Yurub ee Champions League sanadkii 2003 ee John Carew ayaa shacbiyad ku sii yeelanaya dhanka jilitaanka Aflaamta tan iyo markii uu ka fariistay ciyaaraha sanadkii 2013-kii.
John Crew waxa uu u soo ciyaaray kooxo ay ka mid yihiin; Valencia, Roma, Lyon, Besiktas, Aston Villa iyo West Ham United, waxaase aad loogu xusuustaa markii isagoo u ciyaarayay Valencia uu 19-ka bishii Maarso 2003 laba gool uu ka dhaliyay kooxda Arsenal ay sababtay in Gunners ay ka harto Koobka Horyaallada Yurub.
Laacibkan dheer ee 1.95m jeeda ayaa waxa uu sidoo kale horey u soo maray xulka Norway oo uu u ciyaarayay in ka badan 15 sanadood, waxaana gebi ahaanba uu ciyaaraha ka fariistay bishii October ee 2013-kii ka hor intii uusan Norway u safan 91 ciyaar una dhalin 24 gool.
John Crew oo haatan 40-sano jir ah waxa uu ku dhashay Norway, waxaana iska dhalay Aabbe Gambian ah iyo hooyo Norwegian ah.
Laga soo billaabo sanadkii 2014-kii waxa uu John Crew ku biiray dhanka Filimmada, isagoo filimkiisii ugu horreeyay jilay isla sanadkaasi, kaasoo ahaa filim Canadian ah oo lagu magacaabo ‘Dead of Winter’, waxaa kaddib uu wax ka jilay filinkiisii labaad ee Hovdinger oo la daawaday 17-ka bishii July sanadkii 2015-kii.
Wixii ka dambeeyay sanadkii 2018 waxa uu qayb ka yahay filim taxane ah oo laga sii daayo TV-ga Norway, kaasoo uu ku jilayo ciyaartooy cuslaaday oo ka tirsan koox yar oo ka dhisan tuulo ku taalla Norway.
"Ronaldinho waa mid ka mid ah xiddigaha aan ugu jeclahay dunida, waan jeclaan lahaa in aan qosolkiisa oo kale lahaado, laakiin.." – Sadio Mane
Barcelona oo cashar lama ilaawaan ugu dhigtay Camp Nou Kooxda Liverpool xilli Messi uu soo afmeeray baahidii gool ee ka haysatay Reds... + Sawirro